22 Jiona 20 - FJKM Québec - Canada
22 Jiona 20
21 juin 2020 by FJKM-QUEBEC
Hatsarao ny fihavananao amin’ny Tompo
ISAIA 58 : 6-12
58:6 Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako:Dia ny hamaha ny famatoran’ny faharatsiana,sy hanaboraka ny fehin’ny zioga,sy handefa ny ampahorina ho afaka,ary hanapatapaka ny zioga rehetray
58:7 Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va,sy ny hampiantrano ny ory manjenjena,ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka,ka tsy hihirimbelona amin’ny namanao ianaoy
58:8 Fa raha izany, dia hiposaka tahaka ny fahazavan’ny maraina ny fahazavanao,ary ho tonga faingana ny fahasitrananao;ny fahamarinanao ho lohalalanao,ary ny voninahitr’i Jehovah ho vodilalanao.
58:9 Ary amin’izany dia hiantso ianao, ary Jehovah hamaly;eny, hanandratra ny feonao ianao, ary Izy hanao hoe: Inty Aho.Raha esorinao tsy ho eo aminao ny ziogasy ny fanondroan’ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy,
58:10 ary afoinao ho an’ny noana izay hanina tianao,ka mahavoky ny ory ianao, -dia hiposaka ao amin’ny maizina ny fahazavanao,ary ny haizim-pitonao ho tahaka ny mitataovovonana;
58:11 ary Jehovah hitari-dalana anao mandrakarivasady hahavoky ny fanahinao ao amin’ny tany karankaina azasy hampahatanjaka ny taolanao;dia ho tahaka ny saha vonton-drano ianaosy ho tahaka ny loharanao miboiboika izay tsy mety ritra.
58:12 Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela,ary ny naorina hatry ny fony fahagola no hamboarinao;ary ianao dia hatao hoe Mpamboatra ny rava,Mpamelon-dalana honenana amin’ny tany.
Maro ireo fomba fivavahana notanterahan’ny olona tamin’ny andron’i Isaia Mpaminany , izay noheverin’izy ireo hahazoana sitraka amin’ Andriamanitra .Anisan’ireny ny fifadiankanina .
1-Ataovy izay ankasitrahany
Tsy ny fifadiankanina no tsy sitrakan’ Andriamanitra fa ny toe-po sy toe-panahy entina manatanteraka izany . Izay ambara manokana eto dia ny fiahiana ny malemy na ny mahantra sy sahirana. Ny fifadiana dia fanehoam-pitiavana an’Andriamanitra ataon’ny olona manaraka ny didiny. Tiany hanatonantsika sy hampiharintsika amin’ny hafa izany fitiavana izany . « Raha misy manao hoe: Tia an’Andriamanitra aho , nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy , fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany , ataony ahoana no fitia an’ Andriamanitra izay tsy tiany ? » (1 Jao 4.20).
2- Ho entiny amin’ny fahatsarana ianao
Tsy mila vahiny Andriamanitra fa izay mandeha araka ny sitraky ny fony dia raisiny an-tànana ka entiny amin’ny fahatsarana (and11) . Ireto avy izany : hotarihany , hamafisiny hatramin’ny taolana , ho 1fitahiana tsy ho ritra, ho lavitry ny aizina sy fahoriana,tsy ho antsika ihany fa hatraminn’y taranaka any aoriana mihitsy (vakio Deo